पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १४ साउन २०७८ बिहिवारको राशिफल पढौं – OnlinePahar
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) आज चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइनेछ । राशिफल जे जस्तो भएपनि तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
← आज १९ सय ९३ जनाले जिते कोरोना (सक्रिय संक्रमित कती?)
सर्वसाधारणका लागि आजबाट खुलेको नयाँ आईपीओमा कती दिने आवेदन ? →